Dhacdooyinkii Xiisaha Lahaa Ee Doorashada Kenya Ku Ladhnaa Hooyo & Wiilkeedii Oo Tartamay Iyo Arday Dugsi Sare Dhigta Oo La Doortay - Wargane News
Home Somali News Dhacdooyinkii Xiisaha Lahaa Ee Doorashada Kenya Ku Ladhnaa Hooyo & Wiilkeedii Oo...
Doorashadii ka dhacday Salaasadii toddobaadkan, ayaa noqotay doorashadii ugu xiisaha badnayd deegaannada waddanka Kenya qaar ka tirsan dhacdooyinka laga soo tabiyey marka loo eego. Waxaanay arrimaha ugu xiisaha badani noqdeen Hooyo iyo Wiil ay dhashay oo Hal Kursi ku wada tartamay Xildhibaannimada Baarlamaanka Kenya, halka Xildhibaannada guulaystay uu ku jiro 23 Jir Dugsiga sare wax ka barta. Xildhibaan Beatrice Kones oo ah Hooyo Sharraxnayd, ayaa Wiilkeeda Curad oo lagu magacaabo Kipkalya Kones kula tartantay Kursiga Baarlamaanka ee Bariga Bomet ee Koonfura dalka Kenya, ugu danbeyntiina waxay natiijadu noqotay in Wiilkeeda ay ka guulaysato oo ay Kursiga Hooyadii ku fadhiisanayso, sida lagu baahiyey Warbaahinta Kenya iyo ta Caalamiga ah qaarkood-ba. Wiilka oo kaalinta Afraad ka galay tartanka, ayaa sheegay in Hooyadii ay hore ugu ballan-qaaday in ay isaga taageeri doonto doorashada 2017-ka, isla markaasina la soo gaadhay xilligii uu Riyadiisa ka dhabayn lahaa. “Nooma dhaxeeyo wax farqi shaqsiyadeed ah, manaannaan murmin Hooyaday, waayo waa Hooyaday, waxaanay sii ahaan doontaa Hooyadey.” Sidaa ayuu yidhi Kipkalya Kones. Geesta kale, John Paul Mwirigi, ayaa noqday Xildhibaankii ugu da’da yaraa ee loo soo doorto Baarlamaanka Kenya ka dib markii uu ku guuleystey doorasho ka dhacday Igembe Koonfureed. Wiilkan ayaa si ka duwan dadka kale olalihiisa doorasho u sameeyay, isaga oo dadka guryaha ugu tagayay kana dalbanayay in ay codkooda siiyaan.